एक गैर लाभ संगठन कसरी सुरु गर्न | USAHello | USAHello
गैर-मुनाफा मान्छे र मुद्दाहरू मदत संगठन हो. एक गैर लाभ संगठन कसरी सुरु गर्न बारेमा पढ्न र आफ्नो समुदाय मदत.
के तपाईं कहिल्यै गैर लाभ संगठन कसरी सुरु गर्न छक्क परे छ – एक कार्यक्रम वा आफ्नो समुदाय सहयोग गर्न एउटा सानो संगठन? यहाँ तपाईं आफ्नो समुदायमा एउटा समस्या पहिचान गर्न लाग्न सक्छ एक समाधान खोज्न, र विचार पुनर्जीवित गर्न केही कदम हो. पनि गैर-मुनाफा ख भनिन्छ “परोपकार”.
शरणार्थी र प्रवासिहरु विशेष आवश्यकता तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न इच्छा हुन सक्छ छन्. तर तपाईं सिक्न अघि गैर लाभ संगठन कसरी सुरु र मदत, बाहिर अन्य सेवाहरू बाहिर छन् भनेर जाँच. केही अवस्थामा, गैर-लाभ संगठन पहिले नै अवस्थित गर्न मद्दत.
1. समुदायको मा आवश्यकता फेला
कुनै पनि समस्या बिन्दु समाधान गर्न सुरु समस्या पहिचान छ. عندما تفكر في كيفية بدء منظمة غير ربحية ، ما هي القضايا أو الاحتياجات التي تراها في مجتمعك؟ هل ترى الطلاب ينقطعون عن المدرسة أو الفصول الدراسية؟ قد ترى أن هناك حاجة لمساعدة القادمين الجدد الكبار في العثور على وظائف. तपाईं समस्या पत्ता लगाउन एक पटक समाधान बारे सोच सुरु र तपाईं कसरी मदत गर्न सक्छ फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
2. चयन र नाम दर्ता
एक पटक तपाईं आफ्नो मुनाफारहित संगठित गर्ने निर्णय, तपाईंलाई नाम वर्णन लिनुपर्छ. तपाईं एउटा नाम छ कि के तपाईं गैर लाभ संगठन गर्न वा सेवा वर्णन चयन गर्न सक्नुहुन्छ. केही गैर-मुनाफा मात्र एक बुझ्ने शब्द प्रयोग गर्दै. द्वारा नाम प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्. तपाईं कार्यालय सम्पर्क गर्न आवश्यक हुनेछ राज्य को सचिव को कार्यालय. प्रत्येक राज्य यी कार्यालय को एक छ. आफ्नो नाम रेकर्ड गर्न, तपाईं एउटा सानो शुल्क तिर्न र भनिने कागजात पेश गर्नुपर्छ “जग सामाग्री”.
3. को आईआरएस देखि कर छुट लागि लागू
गैर लाभ पैसा बनाउन नगर्ने हो. हुन सक्छ गैर-मुनाफा आफ्नो आय मा कर को गैर-भुक्तानी लागू. के तपाईं प्रकारका भर्न पैसा कमाउन छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ. आन्तरिक राजस्व सेवा मोडेल समीक्षा हुनेछ. तिनीहरूले तपाईं एक सुविधा हुनुहुन्छ लाग्छ भने, तपाईंले एक मामला प्राप्त 501 (ग) (3).
4. कार्य योजना प्रकार
हुनत तपाईं एक व्यापार सुरु हुनेछ तपाईं कार्य को एक योजना आवश्यक हुनेछ! यो एक गैर लाभ संगठन कसरी गणना गर्न मा एक महत्वपूर्ण कदम हो. कार्य को एक योजना बिना, तपाईंले चाहिने कदम कुनै स्पष्ट दृष्टि छ, र तपाईं आवश्यक पैसा यसलाई हुर्काउन, र तपाईं आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नेछ कसरी.
5. आफ्नो गैर मुनाफा को एकीकरण
एक पटक तपाईं गैर-मुनाफा लागि एउटा लेख प्राप्त, तपाईँ तिनीहरूलाई मर्ज गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईंको व्यवस्थापन बोर्ड संरचना आफ्नो कार्यक्रम र सेवाहरू थप प्रत्ययनीय दिनेछु. जम्मा र शुल्क देश भिन्न. कम्पनी एक गैर लाभ संगठन रेकर्ड, तर यो बनाउन गर्दैन 501 (ग) (3) मुक्त.
6. तपाईंको परिषद निर्माण
परिचालक परिषद मान्छे को एक समूह संगठन बारे निर्णय छ. यो कामको लागि तिनीहरूलाई सामान्यतया भुक्तानी गर्न लिइएको छैन. तिनीहरूले संगठनमा काम गर्दै कि परियोजनाहरू चिन्न सहयोग. तिनीहरूले पनि संगठन अरूलाई धन वृद्धि र बताउन मदत छन्. बोर्ड फरक उमेर, जात र पेशों मा मान्छे को उपस्थिति नयाँ विचार ल्याउन.
7. बजेट विकास
तपाईं आवश्यक पैसा कति आफ्नो गैर मुनाफा सुरु गर्न? तपाईं कार्यालय भाडामा चाहनुहुन्छ कि निर्णय र अन्य मानिसहरू मदत गर्न तपाईं किराया गर्न चाहनुहुन्छ भने. तपाईं आवश्यक उपकरण सम्मिलित गर्न समय लाग्न. आपूर्ति र परिवहन विचार. शायद तिमी उधारो गर्न सक्छन् कुराहरू वा सम्झौता छन् वा समुदायको दान.
8. समर्थन लागि आफ्नो समुदाय पहुँच
तपाईं एक लक्ष्य समुदाय निर्दिष्ट गर्दा, तपाईं समर्थन गर्न आवश्यक हुनेछ. विचार समर्थन गर्ने अधिकार मानिसहरू र अन्य संगठनहरू फेला पार्न आफ्नो समुदाय जडान. प्रमुख व्यक्ति र संस्थाहरू समावेश र आफ्नो योजना बारे तिनीहरूलाई बताउन. पुस्तकालयहरु र गैर-मुनाफा र जडान गर्न resettlement ठूलो स्थानहरूको केन्द्र. उदाहरणका लागि, आफ्नो विचार जवान मान्छे स्कूल पछि बास्केटबल खेल्दै बनाउन छ भने, तपाईंले एक सामुदायिक केन्द्र संग र केही trainers सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
कसरी एउटा गैर लाभ को एक कार्यकारी निर्देशक हुन
सार्वजनिक प्रशासन को कार्य
को आईआरएस देखि कर जानकारी दान संगठनहरूको
म कार्य को एक योजना कसरी लेख्न गर्छन्?
गैर लाभ NOLO देखि संसाधन
आफ्नो गैर मुनाफा कसरी एकीकृत गर्न